२ Brand देशहरूमा एक ब्रांडका लागि ग्लोबल मार्केटि Co समन्वय गर्दै Martech Zone
२ Brand देशहरूमा एक ब्रांडका लागि ग्लोबल मार्केटि Co कोर्डिनेट गर्दै
सोमबार, जनवरी 9, 2017 Nate होम्स
ग्लोबल ब्रान्डको रूपमा तपाईसँग छैन वैश्विक दर्शक। तपाइँको दर्शकहरु बहु क्षेत्रीय र स्थानीय दर्शकहरु को शामिल। र ती दर्शकहरु भित्र प्रत्येक क्याप्चर र बताउनको लागि विशिष्ट कथाहरू हुन्। ती कथाहरू जादुई रूपमा मात्र देखा पर्दैन। त्यहाँ पहल गर्न को लागी, क्याप्चर, र त्यसपछि साझेदारी गर्नुहोस्। यसले सञ्चार र सहयोग लिन्छ। जब यो हुन्छ, यो तपाईंको विशिष्ट दर्शकहरूसँग तपाईंको ब्रान्ड जडान गर्नको लागि एक शक्तिशाली उपकरण हो। त्यसोभए तपाईं २ 23 देशहरू, पाँच मूल भाषाहरू, र १ time समय क्षेत्र फ्याँकिएको टोलीसँग कसरी सहकार्य गर्नुहुन्छ?
एक सुसंगत ग्लोबल ब्रान्ड निर्माण गर्दै: -०-पृष्ठ ब्रान्ड दिशानिर्देश कागजातको साथ वास्तविकता
लगातार ब्रान्ड कायम गर्नका लागि ब्रान्ड दिशानिर्देशहरू महत्त्वपूर्ण छन्। उनीहरूले तपाइँको टोलीलाई कसलाई, के, किन, र कसरी ब्रान्डको बारेमा अन्तरदृष्टि दिन्छ। तर ब्रान्ड मापदण्डको 50०-पृष्ठ कागजात एक्लो ग्लोबल ब्रान्ड बढ्दैन। यो केवल एउटा टुक्रा हो जसमा क्लाइन्ट स्टोरीहरू र सामग्री संवादको लागि जोडी गर्न आवश्यक छ।
के तपाईंले विश्वव्यापी ब्रान्ड इनिसमेन्टमा केवल समय र पैसाको एक महत्त्वपूर्ण रकम मात्र लगानी गर्नुभयो? ठूला ब्रान्ड दिशानिर्देशहरू एक्लो छोड्दा विश्वभर टीमहरू संलग्न गर्दैनन्। यदि यसमा सबै नियमहरू छन् र उत्तम देखिन्छ भने पनि, यो जीवनमा आउँदैन। र यो भइरहेको अद्भुत कार्यको साथ पनि, त्यहाँ देशहरूमा साझेदारी गर्न कुनै वास्तविक प्रयास छैन।
एक ग्लोबल ब्रान्डले स्थानीय र क्षेत्रीय दर्शकहरूलाई मार्केट गर्नुपर्दछ र तपाईंको मार्केटिंग टीमहरूलाई स्थानीय मार्केटिंग अभियानहरू डेलिभर गर्न विश्वास गर्नुपर्दछ
तपाईका लक्षित दर्शकहरु सबैजना होइनन्। त्यहाँ एक सामूहिक "विश्वव्यापी" दर्शक छैन जुन तपाईंको टोलीले केन्द्रित गर्न सक्दछ। तपाइँको दर्शकहरु मा धेरै स्थानीय दर्शकहरु शामिल। जब तपाईं उही समान भाषा र फोटोग्राफहरू प्रयोग गरेर सबैलाई बजार दिन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंले क्लिच स्टक फोटोग्राफीको साथ अन्त गर्नुभयो जुन कसैसँग सम्बन्धित छैन। ती २ stories वटा देशहरू मार्फत प्रत्येक मार्केटि team टोलीलाई सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले ती व्यक्तिगत कथाहरू क्याप्चर गर्न र साझेदारी गर्न यी कथाहरू नयाँ र सुधारिएको ब्रान्डको मुख्य हुन्छन्।
तपाईंको विश्वव्यापी कहानी स्थानीय कथाहरू बाट बनेको छ
ग्लोबल ब्रान्ड मुख्यालयभन्दा बाहिर एकतर्फी सडक हुन सक्दैन। मुख्यालयबाट मार्गनिर्देशन र दिशा महत्त्वपूर्ण छ, तर तपाईंको विश्वव्यापी रणनीतिले ब्रान्डले बोल्दै गरेको दर्शकहरूको नजीकको मानलाई बेवास्ता गर्नुहुन्न। त्यहाँ हेडक्वार्टर र विश्वभरका टोलीहरू बीच बिचार र सामग्रीको आदानप्रदान हुनु आवश्यक छ। यसले तपाईंको ब्रान्डको पहुँचलाई विस्तार गर्दछ र तपाईंको ग्लोबल टीमहरूलाई ब्राण्डको स्वामित्व दिन्छ।
यस प्रकारको "सृजनात्मकतालाई अनुमति दिदै" दर्शनले स्थानीय टोलीहरूलाई मात्र सशक्त बनाउँदैन तर अन्य क्षेत्रीय टोलीहरूका लागि तिनीहरूका मुख्यालयका लागि गुणस्तरका कथाहरू र सामग्री प्रदान गर्दछ। अधिक विचारहरू र सामग्री साझेदारीको साथ, अधिक सुसंगत र जीवित ब्रान्ड हुन्छ।
२ marketing देशहरूमा मार्केटि teams टोलीहरू जोड्दै
१ 15 विभिन्न समय क्षेत्रहरूमा काम गर्दा, तपाईं कलहरूलाई तिनीहरूको सञ्चारको एक मात्र माध्यम हुन भरोसा गर्न सक्नुहुन्न, विशेष गरी विकासशील देशहरूको पूर्वाधारसँग व्यवहार गर्दा जुन अक्सर झर्ने कलहरू निम्त्याउन सक्छ। एक सेल्फ-सेवा मोडेल तैनाती गर्दा टिमहरूलाई आवश्यक पर्ने पहुँच गर्न सक्षम गर्दछ, जब उनीहरूलाई आवश्यक परे।
टोलीहरू सेट अप गर्नुपर्छ डिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धन (DAM) प्रणाली। DAM प्रणाली एक सहज, पहुँचयोग्य स्थान हो जहाँ कोही पनि पहुँच गर्न वा सामग्री योगदान गर्न सक्दछन्। यसले कथाहरू र सामग्री साझा गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यी कडा परिश्रम गर्ने मार्केटरहरूको लागि मान सिर्जना गर्दा यसले जैविक प्रणालीको विकास गर्न मद्दत पुर्‍यायो, जहाँ स्ट्यान्डअलोन ब्रान्ड कागजात सपाट भयो।
सबै टीमहरूका लागि केन्द्रीय सामग्री हबको रूपमा एक DAM प्रणाली कार्य गर्दछ। यसले उनीहरूलाई कथाहरू समावेश गर्ने सामग्री जडान गर्न र अनुगमन गर्न शक्ति दिन्छ, र यसले सजिलै पारदर्शिता दिन्छ जुन अन्य टोलीहरूले सिर्जना गरिरहेका छन्। DAM प्रणाली प्रयोग गरेर मुख्यालय, स्थानीय टीमहरू, र अन्यलाई सहयोग पुर्‍याउँछ - केवल व्यक्तिगत रूपमा कार्य गर्दैन।
कसरी डिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धन २ conn देशहरुलाई जोड्दछ
ग्राहकको कथाहरू क्याप्चर गर्नको लागि स्थानीय फोटोग्राफरलाई नियुक्त गर्दै, र फोटोहरू स्थानीय मार्केटि campaigns अभियानहरूमा प्रयोग गरेर। तर यो त्यहाँ रोकिदैन। फोटोग्राफहरू DAM प्रणालीमा अपलोड गर्न सकिन्छ र गुणवत्ता र असाइनमेन्ट मेटाडाटाको लागि समीक्षा गर्न सकिन्छ। तिनीहरू त्यसपछि अन्य सहायक, तेस्रो-पार्टी प्रत्यक्ष मेल, र हेडक्वार्टर द्वारा वार्षिक रिपोर्टहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनीहरूको स्थानीय मार्केटि teams टोलीहरूको सशक्तिकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्दा विचारहरू फैलाउन, मार्केटि campaigns अभियानहरू प्रयोग गर्न, र सफलताको कथाहरू साझा गर्न सहयोग पुर्‍यायो।
टैग: सम्पत्ति व्यवस्थापनब्रान्डिङबाँधडिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापनवैश्विकग्लोबल ब्रान्डफराकिलो
Nate होम्स को लागि मार्केटिंग समन्वयक हो Widen उद्यमहरू र यसको स्मार्टीमेज ब्रान्ड विस्तार। नेटको ब्रान्ड व्यवस्थापन, सामग्री मार्केटि and र मार्केटिंग एनालिटिक्समा गहिरो चासो छ। Nate विभिन्न पृष्ठभूमि को व्यक्ति संग संगठनको सबै आकारहरु मा काम संग रमाईलो छ, ठूला उद्यमहरु मा मार्केटिंग संचार टोली देखि सानो देखि मध्यम आकारका व्यवसायहरु को प्रिन्सिपल को लेकर।
बेलुन, बबल गम, र मार्टेक: कुनचाहिँको होईन?